iPhone Ga-Tụgharịa na - Nweta Solutions Ugbu a!
iPhone gaghị agbanye - Nweta Solutions Ugbu a!
Mgbe onye iPhone gaghị agbanye, e nwere otutu ọnọdụ ị kwesịrị ị na-ewere echiche ma na-achọta nri ngwọta dozie nsogbu gị. Kama plunking download ọtụtụ narị dollar ọhụrụ iPhone, a mma ga-okodu a nkeji ole na ole lelee ngwọta n'okpuru. Ndị a bara uru ngwọta na-anakọtara site na forums m na ahụmahụ, na-enwe olileanya na ha ga-enye aka n'ihi na ị dị ka mma.
# 1.Check si ma iPhone batrị-agba ọsọ ala ma ọ bụ
Ọ bụrụ na gị iPhone rụrụ ọrụ ọma na dị nnọọ awa ole na ole ị na-adịghị eji ya na ọ na-adịghị atụgharị na, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na gị iPhone batrị dị nnọọ na-agba ala na ọ na-gbanyuo. Na nke a, ị kwesịrị ị na jikọọ gị iPhone ka USB ụgwọ na jikọọ na ya ka a mgbidi tinyekwa. Ọ pụrụ iri gị banyere 15 nkeji na-ana ezu ike na-atụgharị ya. Ọ bụrụ na gị iPhone aga n'ime a steeti miri emi n'ahụ, ọ pụrụ-ewe ogologo oge na-ezu ike. Ma ọ bụrụ na ị na-eji eriri USB jikọọ ya na kọmputa gị, mgbe ahụ, ọ ga-ewe gị ihe dị ka ọkara otu awa iji nweta ike Malitegharịa ekwentị.
# 2. Malitegharịa ekwentị gị iPhone ọ bụrụ na gị iPhone dị nnọọ ugboelu mberede
Ọ bụrụ na gị iPhone jiri mberede mgbe ị na-eji ya, mgbe ahụ, gị iPhone adịghị atụgharị na ukwuu n'ime n'ihi na iOS jiri ma ọ bụ femụwe emerụ na mberede. Na nke a, gị dị nnọọ mkpa ka Malitegharịa ekwentị gị iPhone. Jituo Ụra / Tetanụ isi na n'elu gị iPhone ole na ole nke abụọ ruo mgbe Apple logo egosi na gị iPhone amalite.
Cheta na: ma ọ bụrụ na n'elu ụzọ adịghị arụ ọrụ ka Malitegharịa ekwentị gị iPhone, jituo Ụra / Tetanụ isi na Home button n'otu oge ruo mgbe Apple logo egosi.
# 3. Force iPhone mgbake Mode ma weghachi ya
Ọ bụrụ na gị iPhone gaghị agbanye na araparawo Apple logo nke ọnwụ, mgbe ahụ ị na-kwesŽrŽ ịmanye gị iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ ma weghachi ya. Jituo Ụra / Tetanụ button na Home button ole na ole nke abụọ ruo mgbe unu na-ahụ na ihe iTunes na a USB-egosi na gị iPhone, na-arịọ gị jikọọ na iTunes. Na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Ẹkedori iTunes na mgbe e mesịrị iTunes ga-agwa gị na ọ na-achọpụta rụọ ihe iPhone. Site n'ebe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa pịa Weghachi button iweghachi gị iPhone. N'oge usoro nke iweghachi gị iPhone, niile data na gị iPhone ga-ehichapu ya. Mgbe e mesịrị, a ga-enwe otu nhọrọ maka ị iweghachi gị iPhone na otu agadi ndabere faịlụ. Dị nnọọ họrọ ndị ọhụrụ iTunes ndabere iweghachi gị iPhone.
# 4. Malitegharịa ekwentị iPhone ma ọ bụrụ na ọ na-apụghị gbanye ma araparawo Iweghachite ọnọdụ
Ụfọdụ ndị na-kwuru na mgbe ha imelite ha iPhone ka iOS 9, iPhone apụghị gbanye ejikari ma araparawo Iweghachite ọnọdụ. Na nke a, m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake). Download na wụnye ya na kọmputa gị> Jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa> Launch Dr.Fone maka iOS na na isi window, pịa 'Malitegharịa ekwentị ahụ na Ngwaọrụ.
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS ugbu a!
Full Video Concepts nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus
Olee otú Download Music on iPhone, iPad na iPod aka maka Free
5 Best Music App maka iPhone / iPad / iPad Obere
4 ụzọ nyefee music si iphone iPod
3 Ụzọ Nyefee Data si Old iPhone ka iPhone 6 / iPhone 6 Plus
Olee otú Zọpụta Pictures si MMS na iPhone ka a Computer
Olee otú Hichapụ Music si iPhone
> Resource> iPhone> iPhone gaghị agbanye - Nweta Solutions Ugbu a!